Shirwaynihii 5aad Ee Ururka Macalimiinta DDSI Oo Lasoo Gabagabeeyay - Cakaara News
Shirwaynihii 5aad Ee Ururka Macalimiinta DDSI Oo Lasoo Gabagabeeyay
Jigjiga(cakaaranews)Arbaco 5ta,July 2017. Waxaa hoolka shirarka ee kuliyada macalimiinta ee Dr Cabdimajid Xuseen lagu soo gabagabeeyay Shirwaynihii 5aad ee ururka macalimiinta DDSI iyadoo intii uu shirku socdayna lagu doortay hogaaminta cusuub ee ururka hogaamin doonta 4ta sano ee soosocota.
Shirwaynahan ururka macaliinta oo ah mid afartii sanoba halmar laqabto ayaa waxaa kasooqaybgalay Wasiirka Xafiiska Waxbarashada DDSI mudane Ibraahim Aadan Mahad iyo waliba Madaxwaynaha ururka macalimiinta ee Dalkeenan Itoobiya Mudane yohanes binti
Hadaba, shirkan waxaa xidhitaankiisii kahadlay Wasiirka Xafiiska Waxbarashada DDSI mudane Ibraahim Aadan Mahad oo sheegay in xukuumada dalka iyo ta deegaankeenaba ay qaadatay in kor looqaado tayada waxbarashada dalka islamarkaana lahelo macalimiin karti iyo aqoon hufan leh, maadaama oo waxbarashada tayada leh lagu heli karo macalimiin tayo leh. Oo iskuxidhan ahna macalimiin Horumarineed. Wuxuuna intaa kudaray wasiirku in xafiiska waxbarashada DDSI ay kago’antahay sugida xaquuqda macaliminta iyo kor uqaadida tayadooda aqoomeedba.
Sidookale,shirkan ayaa Waxaa lagu doortay 7 xubnood oo ah xubnaha hogaaminta 4 sano ee ururka macalimiinta waxaana laga sii dhaxdoortay gudoomiyaha ururka macalimiinta DDSI oo loodoortay mudane khadar yuusuf meesha gudoomiye kuxigeenkana loo doortay xaliimo ibraahim iyo waliba xoghaya ururka oo loodoortay faysal ceelaabe.
Ugudanbayna,Waxaa halkaasi kahadlay gudoomiyaha cusub ee ururka macalimiinta DDSI mudane khadar Yuusuf oo ugu horayn kaqaybgalayaasha u mahadceliyay doorashada ay udoorteen gudoomiyaha ururka macalimiinta DDSI. Waxuuna xusay in ay ka go’antahay in uu kasoobaxo xilka iyo waajibaadka xilkan balaadhan ee loodoortay.